Lapho umbhangqwana unquma ukuba nomntwana, umbuzo uvela - kungcono kanjani ukulungiselela ukukhulelwa kwengane? Cishe izinyanga ezintathu ngaphambi kokuba ukhulelwe, ochwepheshe bacebisa ngokuqondile ukuthi banakekele ngokukhethekile impilo yabo kumibhangqwana eshadile. Izikhathi eziningana zezempilo eziphakeme kakhulu zandisa amathuba okukhulelwa, zinikeza izifundo ezinhle kakhulu zokukhulelwa, zinciphisa amathuba emasontweni okuqala emibungu, kuze kufike ukukhulelwa.
Uma ubhema, qiniseka ukuyeka. Lapho ukubhema, ukukhula komntwana wesibindi kuvinjelwe, ngenxa yokunciphisa inani le-oxygen engenayo. Ngenxa yalokho, ingane ebuthakathaka ingazalwa. Uma umyeni wakho ephuza, kudingeka futhi akhiphe lo mkhuba omubi ukukusindisa engozini yokubhema umsila.
Ngesikhathi lapho unquma ukukhulelwa ingane futhi ngesikhathi ukhulelwe, kufanele ulahle ngokweqile utshwala.
Uma ungabaza ukuthi unesifo sokuzivikela ku-rubella, buza udokotela, uzokunika i-inoculation uma kunesidingo. Kubalulekile futhi ukuba uqale folic acid - eyodwa tablet ngosuku kunconywa - for amangqamuzana fetal "impahla yokwakha". Kufanele uhambe kudokotela wamazinyo, ukuze ugweme noma yiziphi izinkinga ngamazinyo akho ngesikhathi sokukhulelwa, lapho zizwela kakhulu.
Ngaphezu kwalokho, akudingekile, kunezinyosi ezithambile, i-jerky, i-pâté, amaqanda aluhlaza noma angahlanjulwanga - angaqukatha ama-bacteria we-salmonella noma i-listeria kuyo yonke le mikhiqizo.
Ngemuva konyaka wokuzama ukuphumelela ekukhulelweni, uma uye waba nokuphila ngokocansi njalo ngaphandle kokusebenzisa izisu zokubeletha, udokotela angakuthumela emtholampilo okhethekile nomyeni wakho. Ucwaningo luzoqhutshwa, ngenxa yokuthi ungase unikezwe ukulahleka kwesisindo, ushintsho ekudleni noma ekuzivocavoca ukuze unciphise ukucindezeleka, ngaphandle uma kukhona inkinga enkulu kakhulu kunalokhu, njengokungalali.
Ukuhlola okhethekile kuzokwenza ukuthi ngabe owesifazane uvame ukuvuvukala, nokuthi ngabe isidoda singena esibelethweni - lezi zizathu eziyinhloko ezibangela izinkinga ezifanayo. Uma i-spermatozoa ayikwazi ukudlula eyedwa - kulokhu ukuhlukaniswa okufakelwayo kuyoba yindlela engcono kakhulu. Futhi, isizathu sokungakwazi ukukhulelwa, kungaba, uma isibalo sinesibalo esiphansi se-spermatozoa. Kulokhu, umjovo we-testosterone wesilisa wesimoni ukugqugquzela isilwane ukwakheka kungenzeka.
Endabeni ye-neoplasm enobungozi embelethini - ukungenelela kwe-fibrosis - yokuhlinzwa kungadingeka.
Uma uqinisa impilo yakho ngaphambi kokuba ukhulelwe, uzonikeza ingane yakho isiqalo esihle kakhulu sokuphila.
- shiya utshwala, ngenxa yesikhathi esizayo sempilo yengane yakho;
- Sebenzisa ukudla okunempilo;
- Yiba nokuphumula okuhle futhi uthole ukulala ngokwanele;
- funda ngazo zonke izingozi ezingenzeka emsebenzini;
- Ukusebenzisa amakhemikhali engadini nekhaya, gqoka amagilavu;
- thintana nodokotela wakho mayelana nezifo zefa kanye nemithi oyithathayo.
Ikhono lokukhulelwa umntwana oneminyaka yobudala liye lahlehla kancane kancane kubo bobabili besifazane nabesilisa, nakuba lokhu kungcono kakhulu kwabesifazane, ngoba banomkhawulo ophelele ekukhuleni kwabo, okungukuthi, ukuyeka esikhathini sokuqala.
Kumele kuqashelwe ukuthi ikhono lokukhulelwa noma ukubeletha akuyona into eyodwa okufanele ikhunjulwe. Abesifazane ababeletha lapho bekhulile kufanele bacabangele ukuthi kungenzeka ukuthi ingane yakhe izozalwa nge-Down's syndrome noma ezinye izinkinga. Nakuba omama abanjalo sebeqedile ngokugcwele imisebenzi yabo, bavikelekile ngokwanele ngokwezimali futhi ngenxa yalokho bangazinikela ekufundiseni ingane yabo.
Ikhalenda lokukhulelwa: amaviki angu-25
Ukukhulelwa kungamaviki angu-17
Ukuthuthukiswa kwe-fetus ngesikhathi sokukhulelwa
Ukukhulelwa kanye ne-folic acid
Ikhalenda lokukhulelwa: amasonto ayishumi
Ukungabi nensimbi emzimbeni wesifazane okhulelwe
Pie nge zucchini, feta ushizi kanye nint
Izinyathelo ezingu-7 eziyinhloko zokuqala ibhizinisi lakho eliku-intanethi
Isitidi kanye nensimu
Ama-pepper ashisayo ku-batter
Isaladi ezivela ezinhlobonhlobo zobhontshisi